Football Khabar » युरोपा लिग : आर्सनल र नापोली क्वार्टरफाइनलमै भिड्ने, कसको भिडन्त कोसँग ?
युरोपा लिग : आर्सनल र नापोली क्वार्टरफाइनलमै भिड्ने, कसको भिडन्त कोसँग ?
युरोपको दोस्रो ठूलो क्लब फुटबल प्रतियोगिता युरोपा लिग अन्तर्गत क्वार्टरफाइनल (अन्तिम आठ) को ड्र सार्वजनिक भएको छ । आज शुक्रबार स्वीट्जरल्यान्डको नियोनस्थित युइएफएको केन्द्रीय कार्यालयमा ड्र सार्वजनिक भएको हो ।
कसको भिडन्त कोसँग ?
क्वार्टरफाइनलका खेल कहिलेबाट हुँदैछन् ?
क्वार्टरफाइनलअन्तर्गत पहिलो लेगका खेल आगामी अप्रिल ११ र दोस्रो लेगका खेल १८ तारिखमा हुनेछन् । त्यसपछि सेमिफाइनलका खेल खेलअन्तर्गत पहिलो लेगका खेल मे २ र दोस्रो लेगका खेल मे ९ मा हुनेछन् । युरोपा लिगको फाइनल खेल मे २९ तारिख बुधबारका दिन अजरबैजानस्थित ओलम्पिक स्टेडियम, बाकुमा हुनेछ ।
प्रकाशित मिति १ चैत्र २०७५, शुक्रबार १२:४१